Nzuzo Azụmaahịa Salon: Atụmatụ Ahịa Ahịa Akara 10 nwere ike inyere gị aka inwetakwu ndị ahịa ndị ọzọ | Martech Zone
Lonlọ Mmanya Salons na-etinye ego dị ukwuu na ọnọdụ ha, ndị ọrụ ha na ndị ọkachamara, akụrụngwa ha na ngwaahịa ha. Agbanyeghị, otu ihe ha na-eleghara anya itinye ego na ya bụ mkpọsa ahịa ha. Kedụ ka ndị ahịa ga - esi chọta ụlọ ebe ị na - egwu dị egwu ma ọ bụghị?
Ọ bụ ezie na ịzụ ahịa nwere ike ịbụ ihe aghụghọ ịghọ aghụghọ, ọ ka nwere ike ijikwa, ọ dịghịkwa mkpa ịtụ ụjọ. E nwere ọtụtụ echiche ahịa a nwalere ma nwalee maka salons nke na-arụ ọrụ nke ọma n'ịdọta ndị ahịa ma melite njigide ndị ahịa.
Y’oburu na ibu onye nwe ulo ahia na-acho imezi ihe omuma ahia ha, guo ka ichota ihe ahia i gha eme iji nweta ndi ahia.
Nye mmemme mmemme-enyi - Otu ụzọ ị ga-esi mee ka ọnụọgụ ndị ahịa gị dịkwuo elu bụ ịrụ ọrụ na ndị nke ị nwere. I nwere ike ịnọ na-eche otú. Ọfọn, site na usoro ntinye aka nke usoro. A Ozi Ntuziaka bụ mmemme echere ndị ahịa gị ugbu a. Echiche ahịa a na - agba ndị ahịa gị ume ka ha zoo enyi gị n’ime ụlọ ebe a na - edozi ụlọ gị site na ịbe ha ego maka ndenye ọ bụla na-aga nke ọma. Ihe dị mma gbasara usoro ntinye aka bụ na ndị mmadụ nwere ike ime ihe na ntinye aka karịa oku oyi ma ọ bụ email site n'aka gị. Mgbe nkwanye sitere na onye tụkwasịrị obi na onye dị nso, o yikarịrị ka ọ ga-enweta nlebara anya nke ndị ahịa ọhụrụ. Achọpụtara ndị ahịa akpọrọ dị ka ndị na-eguzosi ike n'ihe karịa ndị ahịa nkịtị. Ihe ọzọ gbakwunyere bụ na ha na-anabatakarị iji ngwaahịa na ọrụ salonlọ Mmanya gị.
Mepụta mmekọrịta na azụmahịa ndị ọzọ - E nwere ọtụtụ ụzọ mmadụ nwere ike isi mepụta azụmaahịa ha. Otu ụzọ isi nọrọ n'elu asọmpi ahụ bụ site na ịmekọrịta azụmahịa ndị ọzọ. Ọtụtụ mgbe anyị na-eleghara ikike nke ịmekọrịta na azụmaahịa ndị ọzọ yana otu ọ ga - esi mee ka ọtụtụ ndị na - azụ ahịa na ego ị na - enweta wee nweta azụmaahịa gị abụọ. Dịka salonlọ Mmanya, ị nwere ike ịmekọrịta na ọtụtụ azụmaahịa. Dabere na mpaghara, ị nwere ike ịmekọrịta na azụmaahịa ndị sokwa gị na ụlọ ọrụ mara mma. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ijikọ na ebe ịhịa aka masịrị gị, ma ọ bụ ma eleghị anya ịchọrọ ịmekọrịta na spa. Site n'echiche ahịa a, ị nwere ike ịbanye ọ bụghị naanị ndị ahịa gị mana ị ga - azụkwa ndị ahịa ndị ọzọ. Ọ ga - abụ ọnọdụ mmeri maka azụmahịa abụọ gị yana ndị ahịa ya n'ihi azụmahịa ha na - enweta.
Nye onyinye n'ọkwá - Onye na-adịghị n'anya a ego? Nke a bụ ya mere ego, ahịa, na nkwalite bụ mgbe a na-anwale ahịa atụmatụ nke na-arụ ọrụ nke ọma maka azụmahịa ọ bụla. Nkwalite ahịa gị nwere ike ịdabere n'ọtụtụ ihe. O nwere ike ịbụ maka ndị ọbịa oge mbụ, ma ọ bụ ikekwe maka ezumike pụrụ iche. Ikekwe ị nwedịrị ike ịhazi ego ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ire ere kwa izu. Site n'ịkwalite salonlọ Mmanya, ị nwere ike ịbawanye okporo ụzọ maka salonlọ Mmanya gị na ịbawanye ntinye akwụkwọ. N'ezie, mgbe inwetara mmụba na ntinye akwụkwọ, o yikarịrị ka ị ga-ewepụta ahịa ka nkwalite promotionlọ Mmanya nke ọma nwere ike ịkwalite ego.
Jiri ahia mgbasa ozi nke ndi mmadu - Obodo mara mma na-eme nke ọma na mgbasa ozi mgbasa ozi n'oge na-adịbeghị anya ma ọ dị mkpa na ndị nwe ụlọ ebe a na-eme ihe eji eme ihe. Mgbe melite a na-elekọta mmadụ media na akaụntụ maka gị tolọ Mmanya na-eme ka ọ dị mfe gị salonlọ Mmanya na-chọpụtara site ọzọ nwere mmasị na patrons. Ozugbo inwetara akaụntụ na-arụ ọrụ na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta dị iche iche, echefula ịzụ ahịa gị. Gbanwee gị mgbasa ozi na atumatu ahia ahia dabere na ikpo okwu ọ bụla maka ahụmịhe ahaziri iche maka ndị ọrụ. Jiri ohere ikpo okwu a na-etinye na foto nke izipu foto nke Instagram ma biputere ịtụnanya iji dọta uche ndị ahịa nwere mmasị. Na-ebuli hashtags gị na isiokwu gị ka ị nwee ike inweta ụdị nlebara anya kwesịrị ekwesị.
Jikọọkwuo site na ịre ahịa email - Mgbe ọ bịara ịzụ ahịa azụmahịa gị n'ịntanetị, elegharala ịzụ ahịa gị anya site na mkpọsa email. Nke a bụ ikpuchi maka ndị ahịa anaghị eso usoro mgbasa ozi mmekọrịta gị mana ha nyere gị email ha. Uru nke iji mkpọsa ahịa email bụ na ị ga-enweta ọtụtụ nsonaazụ maka ọnụ ala dị ọnụ ala. Ọzọkwa, ị nwere ike iji ịre ahịa email mee ụfọdụ echiche ịre ahịa ekwuru na mbụ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike izipu ozi ịntanetị na njikọta ntinye aka iji gbaa ndị ahịa ume ka ha zoo enyi gị maka ego. I nwekwara ike ịkwalite ọrịre ma ọ bụ nkwalite na-amaghị ndị ahịa site na email ha. Ihe niile a na ndị ọzọ nwere ike ime site na email ma ị nwere ike ịkwalite usoro a site na iji nke a salon Ndepụta Ngwaahịa management usoro.
Jiri usoro ihe omume nke usoro ihe omume - Iji usoro ihe omume edebanye aha na ntinye akwụkwọ na salonlọ Mmanya gị nwere ike inye aka bulie usoro a ma mee ka ọ dịkwuo mfe ịhazi oge maka ọrụ gị na ndị ahịa gị. E nwere ọtụtụ atụmatụ maka ndị ahịa na ndị ọrụ iji mee ihe mgbe ha na-eji ụdị sọftụwia a. Otu njirimara na-eme ka ịdenye nhọpụta dị mfe bụ mmelite kalenda dị adị nke ndị ahịa nwere ike ịlele n'ịntanetị. Nke a na - eme ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ikpebi mgbe ha chọrọ ịhazi oge ha ga - ahọrọ maka ọgwụgwọ ha chọrọ. Wezụga nke ahụ, ịhazi usoro ihe omume ga - echetara ndị ahịa gị nhọpụta nke ha setịpụrụ n’ụlọ ezumezu gị. Ọ bụrụ na ndị ahịa ga-akagbu, ọ dịkarịa ala, a gaghị agwa gị n’ụbọchị. Nke a nwere ike inye gị ohere ịhapụ oge ịnabata oge ọzọ.
Soro na ihe omume mpaghara - Otu ihe otutu salons adighi eji ya bu ndi obodo. Salon kacha mma nwere ụfọdụ mmekọrịta na obodo n'ihi na, ka emechara, ọ bụ ebe ahụ ka ọtụtụ azụmaahịa ha si. Nke a bụ ihe mere salons kwesịrị iji gbalịsie ike isonye na mmemme mpaghara. Ma ihe ndị a bụ maka ezumike ma ọ bụ ma eleghị anya maka ngosipụta ejiji, nanị igosi nkwado gị nwere ike ime ka aha azụmahịa gị gbasaa ebe ahụ ma mụbaa ndị ahịa gị.
Nyeghachi obodo gị - Ikwu okwu banyere isonye na ihe omume mpaghara, otu uzo esi eme mmekorita ndi obodo inyeghachi obodo. Ma eleghị anya, jụọ ndị ọchịchị obodo n’ụzọ ndị ị ga-esi nyere obodo aka. Ikekwe ị nwere ike inye ndị na-enweghị ebe obibi ntutu efu. Ikekwe ị nwere ike inye aka kwado ihe omume ebere na-eme n'ọdịnihu. Nke a bụ ụzọ dị mma iji soro ndị ahịa ọhụụ nwere obi ụtọ.
Detuo ụlọ ndina gị na ntanetị n'ịntanetị - onu ogugu enwere ugbua egosiputala na otutu ndi oru mkpanaka na acho ahia na intaneti ma obu ihe ahia na ntaneti tupu ha agaa. Nke a bụ ihe kpatara ị ga - eji mee ka azụmaahịa gị dị ka achọpụta na ịchọta dị ka o kwere mee. Otu ụzọ isi mee nke ahụ bụ site na ịdepụta azụmahịa gị na ndekọ aha n'ịntanetị dịka na Yelp ma ọ bụ na Google Business. Wayzọ a, ndị nwere mmasị na patrons nwere ike mfe chọta gị salonlọ Mmanya na mata gị oghere awa na ọrụ ị na-enye.
Jiri ojiji nke mgbasa ozi - Ozugbo onye ahịa gara na saịtị gị, ma ọ bụ na ha ejedebe na ịzụrụ, ọ dị mfe ịme ka ha gbanwee karịa ndị ahịa ọhụrụ ndị na-emetụbeghị ụdị gị. Iji nwaa ụdị ndị ahịa a, ọ kacha mma iji mgbasa ozi na-agbagha. Y’oburu ibido ngwa ahia ohuru ma obu ogwugwo ohuru, lelee ndepụta nke ndi ahia gara aga ndi nwere ike inwe mmasi n’ebe ha no ma weputa ha na mgbasa ozi banyere ogwu / ogwu a.
Yourlọ ahịa ụlọ ahịa gị ekwesịghị ịpụta itinye nnukwu ego na bọọdụ mkpọsa ma ọ bụ izipu akwụkwọ gburugburu obodo. E nwere ọtụtụ echiche ị ga - eme ire ahịa ị nwere ike ime taa.
Ọ bụ ihe niile banyere ịbụ na aka gị lekwasịrị ahịa dị ka nke ọma dị ka mmeghe gị salonlọ Mmanya ruo ndị obodo. Echerela ogologo oge ọ bụla tupu ịmalite itinye usoro azụmaahịa ndị a ka ị nwee ike bulie ha ka ọ dị mma karịa ozugbo enwere ike.
Tags: email Marketingihe omume mpagharan'ọkwáretargetingime ụlọahịa salonlọ Mmanyausoro ihe omume softwareSocial Media Marketing
Suzy Viola bụ ọkachamara na mgbasa ozi mgbasa ozi na onye na-ese foto. Ọ hụrụ ịkọrọ onye ọ bụla ihe ọmụma ya na ọdịmma ya nke na-eduga ya ịghọ onye edemede na-enweghị akwụkwọ. Na Oh! Ọ bụkwa onye njem.